Torkia: Manamarika Ny Isian’ny Fifampiraharahana Eo Amin’ny Mpioko Kiorda Ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2012 4:21 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, বাংলা, Français, Italiano, English
Efa niteny tao amin'ny Euronews manasongadina ny fiovam-piainan'ny vahoaka Kiorda hatramin'ny 2009 i Hugh Pope, talen'ny tetikasa International Crisis Group ao Torkia sy Shipra:
Notsongaina ho nolazain'i Ismail Beşikçi tao amin'ny tafatafa nifanaovana tamin'i Rudaw izao manaraka izao:
Recently, a nisy tatitra nilaza vao haingana fa mitady fifampiraharahana ny mpiady anaty akata avy ao amin'ny PKK (Antokon'ny Mpiasan'i Kiordistana).
Isan-karazany ny valinteny hita ao amin'ny Twitter; manontany ny fanambarana nataon'i Erdogan taloha momba ny fahombiazan'ny hetsika miaramila hanoherana ny mpioko Kiorda ny sasany.
Miteny ohatra i Necirvan, Kiorda monina any Torkia fa fandanian'andro ny fifampiraharahana amin'ny vahoaka Kiorda ka hiteraka fahadisoam-panantenana. Naverin'i Yezdan izany fomba fijery izany izay nilazany fa tsy tokony hanantena be fahatany amin'io fiezahana hifampiraharaha io ny Kiorda.
Idrees Mohammd mandrangaranga fa miha-mavesatra ny tsindry anatiny mahatonga an'i Erdogan hiresaka fifampiresahana bebe kokoa. Saingy nolazain'i Baxtiyar, izay mpianatra politika sy fifandraisana iraisampirenena, fa ny mahatonga ny fironana mankany amin'ny fifampiraharahana dia noho ny “fahalemen'ny tafika tiorka amin'ny fifanandrinany amin'ny mpiady anaty akatan'ny PKK”.
Tsy misy isalasalana fa vonona ny hifampiraharaha ny mpioko kiorda, satria maro ny olony no maty vokatry ny fandarohana baomba ny tendrombohitra misy ny ankamaroan'izy ireo. Misioka i Hevallo, mpanohana ny Kiorda fa miantso ny “hanaovana indray ny fifampiresahana tany Oslo” ny mpioko Kiorda.
Soratra miverina: Torkia: Tara-pahazavana Bitika Amin’ny Fifampiraharahana Amin’ny Mpioko Kiorda · Global Voices teny Malagasy
[…] herinandro lasa teo ny praiminisitra tiorka Recep Tayyip Erdoğan no nanamarika ny fanombohan'ny [mg] fitadiavana hifampiresaka bebe kokoa eo amin'ny PKK (Antokon'ny Mpiasa Kiordistana) […]
02 Oktobra 2012, 19:32